> Resource > Android > Sidee si ay u gudbiyaan Xiriirada ka Android in Outlook
Waxaan jeclaan lahaa inay u dhoofiyaan / xaalkaa xiriirada aan ku jira oo aan telefoonka iyo aad u gal aan computer dhabarka ah, si ay u saxaa, si ay u aqbasho / dajiyaan iyaga oo Outlook. Waxa la qaban karaa iyo sidee? Ma jiraa wax aan kala soo bixi kartaa ama caawiye gurmad?
Iyada oo badan oo xiriirada telefoonka aad Android, waxaa laga yaabaa in aad rabto in aad si ay u gudbiyaan, kuwaas oo xiriirada ka Android in Outlook u gurmad. Habkan, marka aad telefoon cusub Android ama marka aad lumiso xiriirada shil, si deg deg ah iyaga waxaad ka heli kartaa dib.
Si aad u hagaagsan Android in Outlook, aadka u Waxaan ku talinaynaa in tababare Android: Wondershare MobileGo for Android . Barnaamijkan awood aad si ay u gudbiyaan xiriir telefoonka aad Android in Outlook Express iyo Muuqaalka 2003/2007/2010 si fudud oo effortlessly.
Fiiro gaar ah: Barnaamijka Tani waxay kuu ogolaanaysaa in aad u dhoofiyaan xiriirada Muuqaalka in Android phone aad.
Sida loo hagaagsan Android la Muuqaalka
Hadda, waxaan jeclaan lahaa in aad soo bandhigto sida ay u gudbiyaan xiriirada Android in Outlook. Download this version maxkamad free on your computer. Markaas hubi tallaabooyinka fudud ee hoose.
Tallaabada 1. Connect Android phone kombiyuutarka iyo ordi MobileGo
Si aad u billowdo leh, xirmaan telefoonka aad Android kombiyuutarka labada via cable USB ama via Wi-Fi. Orod MobileGo for Android on your computer ka shaqeeysa Windows 8/7/2003 / XP / Vista. Markaas, telefoonka aad Android la isla ogaado doonaa. Ka dib markii in, u muuqataa in doonistiisa uu furmo suuqa hoose sida shaashadda hoose ayaa muujinaya.
Fiiro gaar ah: telefoonada Multiple Android iyo kiniiniyada si buuxda ay taageerayaan, oo ay ku jiraan HTC, Samsung, Motorola. Riix taageerayaan Phones Android iyo kiniiniyada si aad u hesho faahfaahin dheeraad ah.
Tallaabada 2. Android inay u hagaagsan Muuqaalka
Markaas, guji "Xiriirada" tab geedka buugga bidix. Daaqadda maamulka xiriir ah, doortaan xiriirada in aad rabto in aad u dhoofiyaan. Guji "Import / Dhoofinta" button. Marka menu hoos-hoos u soo booda, waxaad sidoo kale riixi kartaa "Dhoofinta xiriir la doortay si ay u computer" ama "dhoofiyo oo dhan xiriirada in computer". Ka dib markii in, guji "in Outlook Express" ama "in Outlook 2003/2007/2010". Markaas, heshiiska wareejinta bilaabmin. U hubso in aad telefoonka Android ku xiran waqtiga oo dhan.
Sida aad ka arki, marka laga reebo dhoofinta xiriirada Android in Outlook, waxa kale oo aad nuqul ka noqon kara xiriiryada ka Android inay vCard, Windows Live Mail iyo Windows Cinwaanka Book. Haddii aad leedahay xisaab Gmail, aad awoodaan inay u dhoofiyaan xiriirada Android si aad u computer, ka dibna gurmad kuwaas Android xiriirada si aad Gmail warsan aad.
Hadda, download MobileGo for Android in ay isku day ah!
Sidee si ay u gudbiyaan Photos ka Computer si ay Nexus 7
Sidee si ay u gudbiyaan Music ka Computer si ay Android
Sida loo Delete Android nuqul Xiriir
Saddex siyaabood si ay u gudbiyaan muusig iyo sawiro ka Android inay Android
Sida loo kaabta Android Devices oo ka kaabta fudayd Waraaqda Files?
Sida loo isticmaalo Samsung Kies si ay u gudbiyaan Files
Top 5 Android kaabta Software